Ugwaze isoka efuna imali yokukhipha 'isisu' - Ilanga News
Home Izindaba Ugwaze isoka efuna imali yokukhipha ‘isisu’
Kuthiwa isisulu sithulele emtholampilo
UMNU Thabani Mfekayi (27), okuthiwa ugwazwe wabulawa yintombi yakhe ifuna imali yokukhipha isisu. ISITHOMBE: NGOSIZO LOMNDENI
KUPHUME isidumbu ngoMsombuluko eNgoqokazi, eNanda, eThekwini, ngenxa yombango wemali “yokukhipha isisu ”, owesifazane ugcine egwaza, ebulala isoka lakhe ngoba lingafuni nale nkece.
omndeni kaMnu Thabani Mfekayi (27), okubikwa ukuthi ugwazwe inxeba elilodwa emhlane ngumsolwa – esingeke simdalule aze avele enkantolo – onezinyanga eziwu-5 ezithwele ingane kamufi.
Umfowabo kamufi uMnu Thobani Myeni, uthi umfowabo ubulawa nje, ubeseke wambikela ukuthi izinto kazihambi kahle phakathi kwakhe nentombi yakhe, imtshele ukuthi ifuna imali yokuyokhipha isisu, kayiyidingi ingane ngenxa yokuthi isafunda isikole.
Uthi wamtshela ukuthi umsolwa ugwevile endlini aqashe kuyona, akafuni ukugoduka yize bengazwani, wathi uyanqena ukubuyela endlini yakhe ngoba uyazi uzofika khona baxabane.
“Sithole ukuthi ngoMsombuluko ekuseni kusuke ingxabano phakathi kwabo, ngenxa yayo indaba yokukhipha isisu, kwaze kwagcina ngokuthi intombazane ithathe ummese yagwaza umfowethu emhlane.
“Iqede ukwenza lokho yahlala naye endlini yangasibikela, size sabikelwa ngomakhelwane abahlala nabo emqashweni. Siphuthume khona sekuphele amahora angaphezu kwamabili umfowethu egwaziwe, safika le ntombazane ihleli naye esaphefumula, kodwa sekubonakala ukuthi usephele-lwe ngamandla.
“Siyifice ibambe inxeba lakhe, kucaca nje ukuthi omakhelwane ukube kabafonanga, ubezoze athule imbuka ingazami uku-mtholela usizo,” kusho uMnu Myeni.
Uthi bathathe umfowabo bamphuthumisa emtholampilo, wa-fike wathulela khona. Umsolwa bamshiye endlini wahlanza lonke igazi, waze wawasha nezingubo ngoba ezama ukucisha ubufakazi.
“Kusithukuthelisile uma sesizwa ngamaphoyisa ukuthi ufike wabhala isitatimende esingama-nga, wathi umfowethu ubephuzile emlwisa, umgwaze ngoba ezama ukuzivikela.
“Kuyimanje omakhalekhukhwini bakamufi nezinye izinto zakhe ezibalulekile kasizazi ukuthi zikuphi, uma sibuza umsolwa uya-sikhohlisa uthi bezisephaketheni lakhe ngesikhathi simphuthumisa emtholampilo,” kusho uMnu Myeni.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe umsolwa uzinikele emaphoyiseni, ufike eseqhutshwa ngunina. Uthi kulindeleke ukuba avele enkantolo maduze.
Previous articleKusize ILANGA kobexoshwa esibhedle
Next articleUyabalisa ‘owashadiswa nofakazi’